चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता, चीनले के चाहन्छ नेपालमा ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता, चीनले के चाहन्छ नेपालमा ?
चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता, चीनले के चाहन्छ नेपालमा ?
नेपाली काँग्रेसका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा मिचेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन आफ्नो पार्टी हाइकमाण्डलाई बुझाए पनि चीनले तिरमिराएको छ ।
यसअघि पनि चीनले नेपालको भूमी मिच्यो भनि चर्चा चलेको थियो तर चीन तथा नेपाल सरकार स्वयं त्यसको खण्डन गर्दै आइरहेका थिए । तर काँग्रेसका प्रदेश सांसदले प्रमाणसहित प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेपछि चीनका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्यो र त्यहाँको सरकारी अखबारले काँग्रेसलाई भारतपरस्तको आरोप लगायो ।
त्यति मात्र होइन नेपालस्थित भारतीय दुतावासबाट काँग्रेसलाई पत्र पठाएर तथानाम आरोप लगाएको छ र काँर्णालीका सांसदले तयार गरेको प्रतिवेदन कपोकल्पित र झुठा रहेको आरोप लगाएको छ । नेपालमाथि चीनको यो भन्दा अर्को हस्तक्षेप अरु के हुनसुक्छ भनि टिप्पणी भइरहेको छ । देशको एउटा कुनै पार्टीले आफ्नो देशको भूमी चीनले मिच्यो भनि प्रमाणसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमा छलफल गर्नुको सट्टा धाकधम्की र दवावबाट त्यसलाई सल्टाउन खोजेको देखिन्छ । यदि चीनले नेपालको भूमी मिचेको छैन भनि प्रमाण दिनुपर्छ र त्यसका लागि वार्ता समिति गठन गरेर नेपाल सरकारसँग वार्ता गरेर त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ तर चीनले उल्टै धम्की दिएर त्यसलाई सल्टाउने प्रयास गरेको छ ।
पार्टी तथा सरकारलाई दवाव दिनका लागि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छीको अस्वभाविक संक्रियता बढेको छ । हरेक पार्टीका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटेर अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेपाल) सँग नजिक भएको कारण त्यो पार्टीमा आफ्नो बर्चस्व देखाउनु, सरकारमा आफ्नो पहुँच देखाउनु अस्वभाविक मान्न सकिदैन किनभने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन जस्तै नेकपाले काम गर्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेकपाका नेताहरुले प्रशिक्षण लिन थाल्नु भएको छ । नेकपा नेतृत्व सरकारमाथि चीनको अप्रत्यक्ष हस्क्षेप रहेको कुरा चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियताले पनि पुष्टी गरेको छ । सरकार गठनदेखि मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन, मन्त्री हेरफेरमा समेत चिनियाँ चासो पाइन्छ । अहिले चीनले नेकपामा र त्यसको नेतृत्व सरकारमा आफ्नो अनुकुल हरेक काम गराउँदै आएको विदेश मामिलाका जानकारहरु बताउँनुहुन्छ । कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राख्ने, कसलाई फाल्नेसम्मको निर्णय गराउन चीन सफल भएको छ र त्यसमा मुख्य भूमिका राजदूत यान्छीको रहेको नेकपा स्रोतहरुले जनाएको छ । नेपालमा चिनियाँ राजदूतको रुपमा यान्छीलाई सफल मानिन्छ ।
जब जब नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्छ अनि राजदूत यान्छीको सक्रियता बढ्छ । जब यान्छीको सक्रियता बढ्छ अनि नेकपाको विवाद पनि मथ्थर हुन्छ । यान्छीले लगभाग नेकपा, काँग्रेस, जसपा लगायत दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, नाराणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरुलाई भेटेर पार्टीको विवाद समाधानका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैशाखमा भेटेर एक पद छाड्नका लागि सुझाव दिइसक्नु भएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुले शुरुमा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पार्टीको अध्यक्ष तथा सरकारको नेतृत्वमध्ये एउटा कुनै छाड्नु पर्ने अडान लिएपछि राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष सो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले तत्कालै अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यो बेलादेखि प्रधानमन्त्री ओली चीनप्रति दुख मनाउँ गर्दै भारतसँग नजिक हुनुभएको हो । पहिला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात चीनले भनेको कुरा नेकपाका सबै नेताले एकसुत्रले पालन गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली स्वयंले चीनको सुझाव मान्न छाडेपछि नेकपाको विवाद समाधानतिर गइरहेको छैन । भारत र चीनले दुवै पक्षसँग खेलिरहेको कारण विवाद समाधान भइरहेको छैन ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार राजदूत यान्छीले चीनको चासो भन्दै नेकपाको एकता र नेपालमा राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिनु भएको छ । शीर्ष नेताहरू मिलेर नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान होस् भनि चीनले चाहेको र त्यो सन्देश यान्छीले दिन खोज्नु भएको हो । तर प्रधानमन्त्री अ‍ोली, अध्यक्ष प्रचण्ड र विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालसँग चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्नुभएको नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले दावी गर्नुभएको छ । उहाँले पार्टी तथा सरकारमा चीनको कुनै हस्तक्षेप नरहेको प्रतिकृया सञ्चारमाध्यममा दिनु भएको छ ।
चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेकपाभित्र सरकार परिवर्तनलगायत विषयमा भएका छलफलबारे चासो राख्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने बरु पार्टीकै साथीहरुबाट असहयोग भइरहेको धारणा राख्नुभएको थियो । पार्टी एकीकृत रहोस् भनि आफूले चाहेको हो, त्यसका लागि भरपुर प्रयास पनि गरिरहेको हो तर पार्टीकै नेताहरुले एकता विरोधी तथा सरकार विरोधी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको आरोप उहाँले लगाउनु भएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र नेपालले पनि अहिलेको बहस पार्टी एकता र राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रयास भइरहेको धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँहरुले अहिलेको अवस्थामा मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहनु भएको धारणा राख्नु भएको थियो । पार्टीमा समझदारी बनाएर सबैको कुरा सुनेर पार्टीको बैठकबाट निकास दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान, सिद्धान्त र विचारभन्दा फरक ढंगबाट अगाडि बढ्न चाहनु भएको कारण कुरा नमिलेको कुरा यन्छी समक्ष राख्नु भएको स्रोतले दावी गरेको छ । यान्छीले त्यहाँ पनि कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न दिनुहुँदैन, पार्टी विभाजन भयो कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुने र सत्ता गुम्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई जोगाउन सुझाव दिनु भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा फुटको संघारमा पुगिसकेको अवस्थामा पछिल्लोसमय राजदूत यान्छीले फेरि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै भेट्नुलाई रहस्यको रुपमा लिएको छ । त्यो भेटको दुईटा उद्देश्य थियो । चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङ हेको हुन लागेको नेपाल भ्रमणको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । रक्षामन्त्री फेङ हे नेपाल आउने तय भएपनि कहिले आउने कुराको टुगों लागेको छैन । सोही विषयमा यान्छीले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीसँग छलफल गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ । अर्को कुरा नेकपामा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न के उपाय हुनसक्छ भने विषयमा पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको छ । रक्षामन्त्री फेङ हे नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि विवाद समाधानका सुत्र पहिल्याउने कार्य गर्नुपर्ने राजदूता यान्छीको जोड रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा एकपछि अर्को भारतीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भइरहेका छन् । शुरुमा भारतीय जासुस संस्था रअ का प्रमुख सामन्त गोयलले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ । नोभेम्बर २६ तारेखमा भारतीय विदेशमन्त्री हर्षवद्र्धन श्रृगांल आउँदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि विदेश मन्त्री एस. जयशंकारको पनि नेपाल भ्रमण हुने भनिएको छ । त्यसलगतै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह वा गृहमन्त्री अमित शाहको पनि नेपाल भ्रमण हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ । त्यो थाह पाएर पनि चिनियाँहरुको गतिविधि नेपालमा तीब्र भएको हो ।
भारतबाट उच्चस्तरी भ्रमण
पछिल्लो दुईटा उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा सुधारको अवस्था देखिन थालिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्राको सक्रियताका कारण दुई देशबीचका सम्बन्धमा सुधार मात्र भएको छैन । उच्च स्तरीय भ्रमण पनि शुरु हुन लागेको हो । विदेश सचिव सृङ्ला र विदेशमन्त्री जयशंकारको नेपाल आउने तय भइसकेको छ । विदेश सचिव सृङ्ला फर्केपछि विदेशमन्त्री जयशंकरको मिति तय हुने बताइएको छ । हुन त २०१९ डिसेम्बरमा नै विदेश सचिव आउने तय भएको थियो तर त्यतिबेला नै सचिव परिवर्तन भएको थियो । त्यही कारणले भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि कोरोना शुरु हुनुको साथै नेपाल भारतबीच सीमा विवाद पनि शुरु भएको थियो । त्यसले गर्दा भ्रमणमा ढिलाई भएको स्रोतको दावी छ । विदेशमन्त्री पनि त्यस्तै भएको छ । विदेश मन्त्रीको पनि मार्च अप्रिलमै भ्रमण हुने तय थियो । तर दुई देशको विवाद र कोरोनाको कहरले गर्दा भ्रमण स्थगित गरिएको थियो । रक्षामन्त्री तथा गृहमन्त्रीमध्ये एकजनाले नेपालको भ्रमण गर्ने निश्चित भएको छ । त्यो जनवरी वा फरवरी हुन्छ । सीमा विवादलाई लिएर नेपाल भारतबीच सम्बन्ध राम्रो थिएन ।
यो बीचमा भारतीय रअ का प्रमुख सामन्त गोयल र त्यसपछि भारतीय सेनाअध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणपछि सम्बन्धमा सुधार भएको छ । त्यही सुधारका कारण भारतको तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने तयारी भएको हो । सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लागि रहेको बेला भारतले नेपालमै आएर त्यस विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी गरेको छ । यी भ्रमणहरुले सीमा विवादलाई समाधान गर्ने बताइएको छ ।